7 Tandrovy ny Fahasalamanao Fomba mandritra ny diany | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Tandrovy ny Fahasalamanao Fomba mandritra ny diany
Ny ankehitriny valan'aretina ny Coronavirus (Covid-19) manipy ny diany rehetra ho korontana tanteraka, dia mety ho sarotra ny hahafantatra raha tokony foana ny vakansy mandritra ny Coronavirus na tsia. Na dia tsy afaka manao fanapahan-kevitra ho anao izany raha misafidy ny hanohy zava-dehibe mba hahazoana antoka ianao maka fepetra mba hiarovana ny fahasalamana. Noho izany, eto dia 7 Travel torohevitra ny hanampy anareo ho salama mandritra ny diany.
Salama foana mandritra ny diany Number 1: Sasao ny Tananao
Ity iray ity dia mety toa mivandravandra, fa hanasa ny tananareo no iray amin'ireo fomba tsara indrindra mba hitandrina ny tenanao salama. Nahoana? Araka ny National Health Service, “Manasa tanana araka ny tokony ho manala loto, virosy, ary ny bakteria mba hanakana azy ireo miparitaka ny olon-kafa sy ny zavatra, izay afaka hamelatra ny aretina toy ny sakafo fanapoizinana, gripa na ny aretim-pivalanana. Afaka manampy fijanonana ny olona tsy maka ny aretina sy ny fampielezana azy ireo amin'ny hafa”.
Raha tsorina, manasa tanana vokany hanesorana rehetra no hanangonany ny gook mandritra ny andro. Izany dia misongadina indrindra ho an'ny mpandeha. Toerana mpizaha tany dia feno ny miaramilany ny olona manerana izao tontolo izao. Raha arivo isan'andro ny olona iray dia mikasika doorknob, ary iray monja no tsy nanasa ny tanany, mieritreritra ny fomba maloto tsy maintsy ho!
Raha toa ianao any amin'ny faritra tsy misy rano ampy na savony, ianao koa mila manao antoka fa efa nividy sy nampiasa tanana sanitizer tapaka. Raha izany dia afaka maina ny tananao avy, raha ampiasaina matetika loatra, misy ihany koa ny dikan-tanana sanitizer izay ahitana singa moisturizing mba hahafahanao manana tanana madio sy malefaka hoditra.
Efa ela no fantatra fa tsy misy fiantraikany ratsy matory ampy ny hery fanefitra. Raha vakansy dia mety ho toa toy ny hevitra tsara mba hifoha amin'ny hirika sy nihazakazaka ny maraina manodidina mandra-mamatonalina. Na izany aza, ny marina dia fahazoana torimaso ampy dia mihoatra noho ianao impactful Te ​​mieritreritra. Amin'ny alina, Mila fotoana ny vatana mba rejuvenate ary na dia hanasitrana. Ny kely kokoa ny fotoana laninao amin'ny torimaso dia midika hoe ny kely kokoa ny fotoana ho afaka ianao mba tandremo ny tenanao.
Raha ny tena izy, ny fianarana hita mihitsy aza fa ireo izay tsy afaka matory ampy hijaly maharitra fiantraikany ratsy toy ny tosidra ambony sy ny fitadidiana very. Ireo vokany ho trotraka ihany mandritra ny diany, toy izany koa ny tenanao ho famindram-po ary manao antoka fa namely ny mololo ho an'ny farafahakeliny fito ora alina.
Na dia mety ho sarotra aza ny miditra ao amin'ny zzz anao raha nifindra maromaro ianao zones time ary mijaly amin'ny jet lag, dia afaka mampiasa fomba maro samihafa mba hanampiana ny tena tony sy ho voatarika ho any torimaso. Anisan'izany mafana fandroana na ny fandroana, lavender-manitra price, misaintsaina, ary na dia mafana dite. Raha afohezina, nahazo be dia be ny tsy ampy torimaso dia ny hanampy anareo ho salama mandritra ny diany.
Tapakila Marseilles mankany Lyon Train
Tapakila fiakaran'ny fiaran-dalamby any Lyon
Lyon any Avignon Lamasinina
Salama foana mandritra ny diany Ary Aza Tap Water
Raha toa ianao any ho any tena loha tsy fantatra, dia tokony ho hita fa ianao no mila mba hisorohana ny paompy rano. Nahoana? Satria eo an-toerana ny mikraoba ao anatin'ny rano dia faritra-manokana, sy / na esory tsara ny taovany bakteria dia tsy mba vonona ny hiatrika azy ireo. Olona an'arivony isan-taona marary rano fisotro eo an-toerana, amin'ny vokatra toy ny mandoa sy ny aretim-pivalanana matetika. Amin'ny maha-tendron'ny, tsora-kazo ny rano ianao isaky ny tavoahangy lavitra avy amin'ny fampiononana ara-potoana. Izany mandeha avo roa heny noho ny toerana voafetra sy tsy ampy ny fahadiovana amin'ny fanao. Hafa firenena mandroso tsy afaka mampiasa rano fisotro avy amin'ny loharano toy ny trano fidiovana ihany service tianao. Eny, izany no zavatra!
koa, ho azo antoka tsara ianao hydrate. Hot hafanana sy ny asa mafy dia tapakila haingana tany amin'ny hopitaly tsy misotro rano ampy.
Get ny Shots
Arakaraka ny toerana misy handeha ianao, mety Mila manokana Travel tifitra amin'ny toeram-pitsaboana, na fitsaboana hafa foibe. Marina indrindra izany ho an'ny firenena mandroso ny sasany kosa kely, izay mbola fanatanjahan-tena ny aretina toy ny tazomoka sy ny tazo vony. Alohan'ny lohan'ny avy amin'ny diany, jereo ny Foibe Miady Amin'ny Aretina (CDC) tranonkala. Eto dia afaka mahita ny fepetra takiana manokana ho an'ny firenena izay mandeha ianao. Raha toa ka tsy avy any Etazonia, dia azonao atao ny mijery ny tranonkala an-toerana, toy ny NHS, noho ny fepetra takiana ho an'ny salama mandeha.
Tandrovy ny Fahasalamanao: Aza mikasika ny tavanao
Rehefa Efa niresaka momba ny fanasana tanana, ankehitriny tonga ny fotoana hiresahana momba ny tavanao. Matetika ianao mahita olona sasatra ny lohany teny an-tànany, Scratching ny kongonina, na raha tsy izany dia mikasika ny tarehiny. Tena mafy fahazarana mba handrava fa hitandrina ny tananao lavitra ny tavanao ianao, raha miezaka ny ho salama foana mandritra ny diany.
Izany heviny mahazatra, toy ny tananao zavatra maro mikasika izany mandritra ny tontolo andro. Eo amin'ny lamasinina na fiaramanidina, ianao manana ny lovia latabatra, ny seatbelt. ary isan-karazany hafa iombonana faritra toerana fa mampihetsi-po ianao. Raha tsy ianao manasa tanana isaky ny zavatra mikasika (na hitranga, tsy manao fonon-tanana), tsara kokoa izany hevitra mba hitandrina ny tanana eny ny tavanao amin'ny fotoana rehetra.
Tsy misy dikany fa ianao handeha hihinana tsara raha mbola vakansy, marina? Sady koa anie, inona no Espaina tsy misy sokola sy churros, ary inona no tsy misy baguette Frantsa? Tsy ny zavatra hoe, na izany aza.
sakafo matsiro Raharaha tsara ihany sy ny tsara, fa tokony mba hahazoana antoka fa ianao sakafo ara-pahasalamana ihany koa. Araho ny sakafo sy ny mifamadika avy piramida ireo goodies lalina-nendasina ho an'ny sasany Maitso rehetra indraindray. Raha manana toerana ho azy, ento miaraka aminao vitaminina mba tena ahitana faritra feno ny. Ataovy azo antoka ny hitondra vitaminina C, probiotics, sy ny hafa mora-to-hahafongana vitaminina.
Io no tena mifandray amin'ny misotro toaka rehefa mandeha ihany koa. Izany dia midika hoe tsara fantatra fa misotro toaka be loatra dia afaka hitondra any amin'ny nampidinina hery fiarovana (ary ny sasany ratsy fanahy hangovers). Raha miezaka ianao mba tsy mahazo marary, ho azo antoka mitandrina ny fisotroana toaka ho faran'izay kely. Sady koa anie, izay te-hitsidika ny Mona Lisa miaraka amin'ny sery mahazatra?
Last Tandrovy ny Fahasalamanao Soso-kevitra: Manadio ny Area
Mety ho manahirana, fa ny mendrika ny mitondra ny sasany disinfecting mamafa miaraka aminao isaky ny mandeha. Nahoana? Mba hanadio izay rehetra lovia latabatra sy ny seza izahay, Efa voalaza. Clorox mamafa azo vidiana amin'ny ampahany ka nataony tao anaty kitapo ziplock. Afaka hitondra azy avy eo miaraka aminao eo amin'ny MANAOVA.
Aoka ho azo antoka ny mamafa ny armrests, seatback paosy (raha manana ianao), ary na dia ny seatbelt jaigrafy amin'ny famonoana bibikely ho fanampiana azo antoka fa amin'ny faritra misy anao fitehenan-tanana araka izay madio araka izay azo atao.
Marary ny Olona? Raha nandeha matetika kokoa mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra. Aza ho tahaka ny olon-drehetra. Tandremo ny tenanao sy ny fampiasana Save A Train!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “7 Tandrovy ny Fahasalamanao Fomba mandritra ny diany” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fstay-healthy-while-traveling%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Ao amin'ny rohy manaraka ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, ity rohy ity dia ho an'ny teny Anglisy làlana fiantsonana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / de ho / tr na / en sy ny maro hafa fiteny kevitra tiany.
Ahoana no fomba fanaovana traikefa eo amin'ny sehatry ny fandraharahana amin'ny fomba mahitsy
Business Travel ny Train, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Train Travel UK, Travel Europe
Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby any Norvezy, Train Travel The Netherlands, Travel Europe